Warehouse Manager Archives - Glory Assumption Space
Warehouse Manager – Male - ( 5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Warehouse Manager – Male - ( 5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ။ • Warehouse Manager ရာထူးဖြင့် အတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Computer ( Word , Excel , Internet , Email ) အသုံးပြုတတ်ရမည် ။ • Stock ပိုင်းဖြင့်လုပ်က်ိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည် ။ • Container အတင်အချ နှင့် ၊ ၀န်ထမ်းများကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Lubricant Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Lubricant Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
၁)Warehouse Manager – Male - ( 5) Posts / လစာ - ၈၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ် ။ • Warehouse Manager ရာထူးဖြင့် အတွေ့အကြုံ ( ၅ ) နှစ်ရှိရမည် ။ • ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည် ။ • Computer ( Word , Excel , Internet , Email ) အသုံးပြုတတ်ရမည် ။ • Stock ပိုင်းဖြင့်လုပ်က်ိုင်ခဲ့ဖူးသူဖြစ်ရမည် ။ • Container အတင်အချ နှင့် ၊ ၀န်ထမ်းများကိုကောင်းမွန်စွာအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည် ။ • ယူနီဖောင်းရှိသည် ။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈း၃၀ နာရီမှ ညနေ ၅း၀၀ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ • စနေ တစ်ပတ်ခြား ၊ တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်သည် ။ • မြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Lubricant Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည် ။ GAS Recruitment နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောမြောက်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ Lubricant Company ကြီးတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အထက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Warehouse Manager – Male /Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ်
၁) Warehouse Manager – Male /Female - (5) Posts / လစာ - ၅၀၀,၀၀၀ ကျပ် / တာမွေမြို့နယ် ။ • Warehouse Management ပိုင်းဖြင့်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ ( ၃ ) နှစ်အထက်ရှိရမည်။ • အသက် ၃၀ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။ • ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ • System Software အသုံးပြုနိုင်ရမည်။ • English စာ ရေး၊ဖတ်၊ပြော နိုင်သူဦးစားပေးမည်။ • အလုပ်ချိန် မနက် ၈ နာရီခွဲမှ ညနေ ၅ နာရီအထိတာဝန်ထမ်းဆောင်ရပါမည်။ • စနေတပတ်ခြား၊တနင်္ဂနွေနှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်ပိတ်သည်။ GAS Recruitment နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တာမွေမြိုနယ် တွင်ရှိသော Retail Company တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အထက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည် ။ မှတ်ချက် ။ ။ လျောက်ထားလိုသည့်ရာထူးများကို တစ်ပါတည်းဖေါ်ပြပေးကြပါရန် နှင့် CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်း ထည့်သွင်းပေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက် လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သား စွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 977397705 , 09958103983, 09263121101, 09262223783 , 09262223784 , 09262223785 Viber Phone Number – 09977397705 , 09262223784 , 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့်နီးပါသည် ။ )
Warehouse Manager – Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Manufacturing Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်းအင်တာဗျူးဝင်ရမည်။ 1.Warehouse Manager – Male (5) Posts /လစာ - ၆၀၀,၀၀၀ ~ ၉၀၀,၀၀၀ကျပ် /လှိုင်သာယာမြို့ နယ်။ - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ ရဖြစ်ရမည်။ - အသက် (၃၀) နှစ်အထက်ဖြစ်ရမည်။ - English4Skills ကျွမ်းကျင်ရမည်။ - Management နှင့်သက်ဆိုင်သော Certificate ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - Factory Warehouse Manager ပိုင်းဖြင့် လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ(၅) နှစ်ရှိရမည်။ - Ms.Office, Computer Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr3@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223784, 09262223783, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Warehouse Manager – Male - (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော FMCG Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ 1.Warehouse Manager – Male - (5) Posts / လစာ - ၄၀၀,၀၀၀ ကျပ် / မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်။
• ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ • FMCG ပိုင်းတွင်လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ • Computer Word,Excel ကျွမ်းကျင်ရမည်။ • အသက် ၃၀ အထက် ဖြစ်ရမည်။ • မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number - 09- 262223785 , 09 977397705, 09262223783, 09263121101 Viber Phone Number – 09263121101, 09262223783, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Warehouse Manager- Female (5) Posts/Salary- 300,000 Kyats
1. Warehouse Manager - Female (5)Posts / Salary – 300,000 Kyats/Hlaing Thar Yar Township. - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှ ဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။ - FMCG ပိုင်းနှင့် warehouse လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ (၃) နှစ်ရှိရမည်။ - ကုန်ပစ္စည်းအ၀င်အထွက်စာရင်းများအားစီစဉ်နိုင်၍ စနစ်တကျသိုလှောင်မှုအားကြီးကြပ်နိုင်ရမည်။ -ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းများအား ထိရောက်စွာရေးဆွဲညွှန်ကြားနိုင်ရမည်။ /
Warehouse Manager/Supervisor - Male (5) post
Age between 23- 30 years old Any Graduated ( Prefer B.Com (or) LCCI Level (2) ) Above3years experiences as warehouse manager Can use well Excel and Microsoft